အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု - Shenzhen Manke Technology Co., Ltd.
Mankeel အရောင်းအပြီးတွင် စည်းကမ်းချက်များ နှင့် အာမခံ
ဤအပိုဒ်သည် Shenzhen Mankeel Technology Co., Ltd. မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့် Shenzhen Mankeel Technology Co.,Ltd မှ လုပ်ဆောင်သည့် ပြင်ပကုမ္ပဏီ အွန်လိုင်းအရောင်းပလက်ဖောင်းများတွင် ရောင်းချသော Mankeel ထုတ်ကုန်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ Shenzhen Mankeel Technology Co., Ltd သည် သုံးစွဲသူများအား ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Mankeel ထုတ်ကုန်များကို တစ်နှစ်အာမခံဖြင့် ဝယ်ယူထားသူ။ အသုံးပြုသူလက်စွဲအတိုင်း ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းသည် ပျက်ကွက်ပါက ဝယ်ယူသူများသည် အာမခံကတ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီထံ ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်သည်၊ အာမခံကာလအတွင်း သင့်အား ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးပါမည်။
Mankeel လျှပ်စစ်စကူတာ ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တစ်နှစ်အာမခံ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါမည်။ အာမခံကာလအတွင်း၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးပြဿနာများကြောင့် ထုတ်ကုန်ကို ပုံမှန်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူပြီး7ရက်အတွင်း၊ ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့် အခြားတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီထံ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အာမခံကာလ ကုန်ဆုံးပြီးနောက်၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သော ထုတ်ကုန်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အခကြေးငွေကို ကုမ္ပဏီမှ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
1. လျှပ်စစ်စကူတာဘောင်နှင့် ပင်မတိုင်များ၏ ပင်မကိုယ်ထည်အား တစ်နှစ်အာမခံပါသည်။
2. အခြားသော အဓိက အစိတ်အပိုင်းများတွင် မော်တာများ၊ ဘက်ထရီများ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများနှင့် တူရိယာများ ပါဝင်သည်။ အာမခံကာလမှာ6လဖြစ်သည်။
3. အခြားလုပ်ဆောင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများတွင် ရှေ့မီး/နောက်မီးများ၊ ဘရိတ်မီးများ၊ တူရိယာအိမ်ရာများ၊ အကာအရံများ၊ စက်ဘရိတ်များ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ဘရိတ်များ၊ အီလက်ထရွန်းနစ် အရှိန်မြှင့်စက်များ၊ ခေါင်းလောင်းများနှင့် တာယာများ ပါဝင်သည်။ အာမခံကာလမှာ3လဖြစ်သည်။
4. ဖရိန်မျက်နှာပြင်ဆေးခြယ်ခြင်း၊ အလှဆင်ထားသောအကန့်များနှင့် ခြေဖဝါးပြားများအပါအဝင် အခြားအပြင်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကို အာမခံတွင် မပါဝင်ပါ။
အောက်ပါအခြေအနေများတွင်မဆို အခမဲ့အာမခံဖြင့် အကျုံးမဝင်ဘဲ အခကြေးငွေဖြင့် ပြုပြင်ပေးပါမည်။
1. အသုံးပြုသူ၏ “ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ” နှင့်အညီ အသုံးပြုရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ချိန်ညှိရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချို့ယွင်းချက်။
2. အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ဖြုတ်တပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို မလိုက်နာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊
3. အသုံးပြုသူမှ မသင့်လျော်သော သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် မတော်တဆမှုကြောင့် ပျက်ကွက်ခြင်း။
4. တရားဝင်ပြေစာ၊ အာမခံကတ်၊ စက်ရုံနံပါတ်သည် မော်ဒယ်နှင့် မကိုက်ညီပါ သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲထားသည်။
5. မိုးရေထဲတွင် ရေရှည်စီးခြင်းနှင့် ရေထဲတွင် နှစ်မြှုပ်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးခြင်း (ဤအပိုဒ်သည် Mankeel လျှပ်စစ်စကူတာ ထုတ်ကုန်များအတွက်သာ)
1. အာမခံစည်းကမ်းချက်များသည် Shenzhen Mankeel Technology Co., Ltd မှ ရောင်းချသော ထုတ်ကုန်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အခြားချန်နယ်များမှ ဝယ်ယူသည့် ထုတ်ကုန်များအတွက် ကုမ္ပဏီသည် အာမခံတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
Shenzhen Manke Technology Co., Ltd. သည် အထက်ပါကိစ္စရပ်များ၏ နောက်ဆုံးအနက်ပြန်ဆိုပိုင်ခွင့်ကို လက်ဝယ်ရှိပါသည်။